हावाहुरीका कारण ३ जनाको मृ’त्यु (अपडेट) – Sadhaiko Khabar
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०७, २०७९ समय: ६:१९:३८
चितवन / चितवनमा भीषण हावाहुरीका कारण रुख ढ’ले’र च्या’पिदा तीन जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
शुक्रबार साँझ ७ बजे बजे भीषण हावाहुरीको कारण भरतपुर–११ भोजाड जंगलस्थित भित्री सडक खण्डमा पदमपुरबाट आउदै गरेको ना२ह २२४७ नम्बरको अटो कि’च्दा अटो चालक भरतपुर ११ लामाटोलका अन्दाजी ५०/५१ वर्षीय प्रदिप कुमार लामा र अटोमा सवार गोरखा गण्डकी गाउँपालिका ६ घरभई हाल भरतपुर ७ कटहर चोक बस्ने २८ वर्षीय माया गुरुङको घ’ट्नास्थलमा नै मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिए ।
अटोमा सवार सोही स्थानका २० वर्षीया अबिता गुरुङ र बर्ष ५० वर्षीया तुल माया गुरुङ सामान्य घा’इते भएका प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (पुरानो मेडिकल कलेज) मा उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै हावाहुरीको कारण ढ’लेको रुखले कि’चेर भरतपुर ११ निवासी ४८ वर्षीय लोकनाथ अधिकारीको मृ’त्यु भएको छ । भरतपुर ११ बसेनिचोकमा बिशाल चोकबाट आउदै गरेको ना १ ज ६१४० नम्बरको म्याजिकलाई रुख ढ’लेर कि’चेको हो । ढ’लेको रुख का’टी हटाई बाटो सुचारु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मृ’तकको श’व भरतपुर सरकारी अस्पतालमा पठाइएको छ ।
यो पनि :- हावाहुरीले रोल्पाको विभिन्न स्थानमा क्ष”ति : रोल्पा / शुक्रबार साँझदेखि चलेको हावाहुरीले रोल्पाको विभिन्न स्थानमा क्ष’ति पुर्याएको छ। हावाहुरीले रोल्पाको गङ्गादेब गाउँपालिकाको वडा न. ४ को वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकिको भवनको जस्ता पाताको छानो उडाएको छ ।
यसैगरी सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको वडा न. को हरि बहादुर पुनको घरको सबै छानो उडाएर क्ष’ति पुर्याएको र सोही पालिकाको वडा न. २ को खुङ्ग्री गाउँका केही घरहरुको समेत छानो उडाएर क्ष’ति पुर्याएको छ ।
हावाहुरीले जिल्लाका केही ठाँउका घर,गोठमा सामान्य क्ष’ति पुर्याएको खबर प्राप्त भएको र कुनै मानवीय क्ष’ति भने नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक थमन जिसिले बताएका छन् ।